Izindaba - Ukusetshenziswa kwe-proply gallate
I-Propyl gallate (PG), eyaziwa nangokuthi i-propyl gallate, inefomula ye-C10H12O5. Isisindo samangqamuzana esihlobene ngu-212.21. Njengoba amaShayina "Amazinga Wenhlanzeko Okusetshenziswa Kwezithasiselo Zokudla" (GB2760-2011) esho: Ipropyl gallate ingasetshenziswa emafutheni okudla, ekudleni okuthosiwe, kwimikhiqizo yezinhlanzi ezomisiwe, kumabhisikidi, kuma-noodle asheshayo, elayisi elisheshayo, amantongomane asethinini, imikhiqizo yenyama ephulukisiwe, njll. Inani lokusetshenziswa ngu-0.1g / kg.
Propyl gallate Izici zamakhemikhali Amakristalu amhlophe afana nenaliti amhlophe noma amhlophe ukukhanyisa impuphu ekhanyayo ephuzi ngombala, engenaphunga, ebabayo, iphuzu lokuncibilika 150 ℃. Kuzinzile ekushiseni, futhi kunenzuzo yokubola lapho kuvezwa ukukhanya. Inombala onsomi noma oluhlaza okotshani uma ivezwe ku-ayoni yethusi nensimbi, futhi iyi-hygroscopic. Iyancibilika kalula emanzini ashisayo, i-ethanol, i-propylene glycol, i-glycerin, uwoyela wekotini, isinqumelo, u-oyela wamantongomane ne-ether, kepha ayincibiliki neze emanzini abandayo. I-pH yesisombululo samanzi esingu-0.25% icishe ibe ngu-5.5. Amagundane ane-LD503800mg / kg yomlomo kanye ne-ADI 0-1.4mg / kg (FAO / WHO, 1994).
I-Propyl gallate nayo iyi-ejenti yokuphakelayo evunyelwe ukusetshenziswa eChina futhi isetshenziswe kabanzi phesheya. IsiShayina sisho ukuthi singasetshenziselwa amafutha adliwayo, ukudla okuthosiwe, amabhisikidi, ama-noodle asheshayo, irayisi eliphekwe ngokushesha, amantongomane asethinini, imikhiqizo yenhlanzi eyomisiwe nemikhiqizo yenyama ephulukisiwe, kanti inani lokusetshenziswa lingu-0.1g / kg. Ikhono le-PG kusinqumelo selinamandla kunele-BHA noma le-BHT. Uma ixutshwe ne-BHA noma i-BHT, umphumela we-synergist uyangezwa.
I-PG ibuye ibe yi-ejenti encibilikiswa uwoyela evunyelwe ukuthi isetshenziswe eChina futhi isetshenziswe kabanzi phesheya. Ikhono le-PG kusinqumelo selinamandla kune-BHA noma i-BHT. Uma ixutshwe ne-BHA ne-BHT, i-synergist iyangezwa, kepha umphumela kumikhiqizo ye-noodle awunamandla njenge-BHA ne-BHT. Izwe lami libeka ukuthi lingasetshenziselwa amafutha adliwayo, ukudla okuthosiwe, amabhisikidi, ama-noodle asheshayo, irayisi eliphekwe ngokushesha, amantongomane asethinini, imikhiqizo yezinhlanzi ezomisiwe nemikhiqizo yenyama ephulukisiwe, kanti inani lokusetshenziswa ngu-0.1g / kg.
I-Propyl gallate iyisithako sokudla nokuphakelayo. Isetshenziswa njenge-oxidant yomgodi wamafutha, amalade, njll., Inomphumela oqinile, kepha inenkinga yokufaka imibala. Umthamo ungaphansi kuka-0.1g / kg. Lapho isetshenziswa njenge-ejenti yokuphakelayo, isilinganiso * ngu-100 ppm. Ingasetshenziswa futhi kwizimonyo. Igundane lomlomo LD50 lingu-3.8g / kg.